Free Download System Open Music (NOLOL) ee Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > System Open Music (NOLOL) ee Mac
System Open Music (NOLOL) waa wax soo saarka iyo duubo codsiga maqal ah. Qalabkani software ka mid app this xakameeyo socodka macluumaad MIDI dhexeeya hardware MIDI iyo codsiyada. Waxaa jira kala duwan ee qalabka MIDI ka tirsan mid ka mid ah ama ka badan interfaces MIDI in studio ah MIDI caadiga ah.
Heerarka, isgaarsiinta MIDI dhexe
Thanks to NOLOL, dhammaan codsiyada si fudud u isticmaali caadiga ah, isgaadhsiinta MIDI dhexe ay bixiyaan NOLOL. Si kastaba ha ahaatee, codsi kasta MIDI shakhsi waa in ay la socdaan oo dhan interfaces qalabka MIDI, iyo isgaarsiinta xogta aan NOLOL.
Taageer interfaces badan
Version buuxda ee NOLOL, taas oo macne badan version Lite ah, waxa ay taageertaa badan ee interface caadiga ah Mac. Intaa waxaa dheer, waxaa jira darawallada u Studio 4, 64X, 5LX, iyo sidoo kale interfaces 64XTC in version this.
Oo ay taageerayaan Apple QuickTime, System Open Music (NOLOL) natively qalabka Apple, kaas oo noqon doona haboon users Apple shaqeyn karaan. Intaa waxaa dheer, app tani waa fududahay in la isticmaalo. Waxaad sidoo kale ay awoodi karaan inay dhigay ilaa hal mar dhammaan codsiyada MIDI, oo aadan qaadan doontaa waqti badan. System Open Music (NOLOL) sidoo kale waxay bixiyaan magacyada warshada qalabka ka badan boqol.